ဝါးတားတားများ | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← ကယန်း (ပဒေါင်)
April 19, 2008 · 11:00 pm
Vote No တဲ့။ No Vote တဲ့။ ကျနော်လည်း တတ်သိနားလည်သူများက ရေးနေကြတာကို အလျဉ်မပြတ်ဖတ်နေပါတယ်။ တချို့က ပရမ်းပတာ ဆဲစာရေးကြသည်။ တချို့ကလည်း ဆရာကြီးလေသံနှင့် တောင်ပို့မှန်းသိအောင် ဖွတ်ထွက်ပြနေကြသည်။ အကျိုးသင့် အကြောင်းဆွေးနွေးကြပါလို့ ပြောသူတွေလည်း ဒီအချိန် ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ ဟု ပြန်ပက်ခံရသည်။ တချို့ကတော့ ဆော်ကြမည်တဲ့။ ဘယ်လို ဆော်မလဲဆိုတော့ မသိသေးဘူးတဲ့။
ကျနော်တို့ ဇဝေဇ၀ါ၊ နဝေတိန်တောင် ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကြီးပြင်းလာကြသလိုဖြစ်နေသည်။ အပေါ်ယံတွေနဲ့ ဟုတ်မလိုလို ခေတ်ကြီးမှာ နတ်ကရာ ကျီးမော့ရင်း နိုင်ငံလည်း ငမွဲစာရင်း ၀င်သွားခဲ့ရပြီ။ အပေါင်းအသင်းတချို့ဆီ မဲလာပေးဖို့ စာရောက်နေ၍ ဂွကျနေကြသည်။ ဂွကျပုံကတော့ အမြန်ဆုံးကားနဲ့တောင် တစ်ညအိမ်ခရီးနဲ့ သွားရမယ့် သံရုံးရှိတဲ့နေရာကို ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် (အနည်းဆုံး မြန်မာငွေတစ်သိန်းလောက်) အကုန်ခံပြီး မဲသွားပေးရမှာ မို့လို့ပါပဲ။ ကျနော့်ဆီတော့ ဘာစာမှရောက်မလာပါဘူး။ သံရုံးကတော့ မသိစရာအကြောင်းမရှိပါ။ တက္ကသိုလ်ကိုလည်း အကြောင်မကြားပါ။
ကျနော်ဥာဏ်မီသလောက်၊ အခုအထိ မြင်သလောက် ပြောရရင် နအဖက ချည်ပြီးတုပ်ပြီး အပိုင်ရိုက်မယ့် သဘောရှိနေပါပြီ။ သင်္ချာကို အမှတ်လေးဆယ်ထက် ပိုမရဖူးသော ကျနော့် အစွမ်းဖြင့် တွက်လျှင်ပင် Vote No ဖြစ်ဖြစ်၊ No Vote ဖြစ်ဖြစ် မိအေးကတော့ နှစ်ခါနာဖို့ရာ သေချာလျက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ကျနော့်ဘ၀မှာ ပထမဆုံးပေးရမယ့် နိုင်ငံရေးမဲ ဖြစ်ပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မဲသွားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နအဖရဲ့ စီမံမှုအပေါ်မှာ ကျနော် Trust မရှိလို့ပါ။ တခြား အချက်အလက်တွေ၊ မူဝါဒတွေ၊ ၀ိဝါဒတွေ ထားလိုက်ဦး၊ လောလောဆယ်မှာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အချက်တွေထဲက နိုင်ငံတကာရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုဆိုတာကြီးကို ပယ်ချလိုက်ကတည်းက အကြီးအကျယ် စိတ်လည်းပျက်၊ စိတ်လည်း ကုန်ခဲ့ပါပြီ။
နိုင်ငံလည်း ချွတ်ခြုံကျနေတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ပညာရေးမှာလည်း ယိုယွင်းခဲ့ပါပြီ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကလည်း လက်တစ်ဆုပ်စာ လူစုလောက်ပဲ ကောင်းစားနေတာပါ။ မကြာသေးခင်က ထိုင်းကို ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၄ ယောက် ရေခဲခန်းကားထဲ သေခဲ့ရတာ နမူနာကြည့်ပါ။ အသေခံ ဗုံးခွဲတာတောင် လူဒီလောက် မသေနိုင်ပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုတာလည်း ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်တို့လို ဖွတ်ချက် နောက်တက်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နောက်ကောက်ကျနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ မြင်ကို မမြင်ချင်ပါ။ သူတို့ ဘယ်သူတက်တက် ကျနော် ဂရုမစိုက်ပါ။ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူ မကောင်းစားဘူး၊ ကိုယ့်လူမျိုး မျက်နှာငယ်ရမယ်ဆိုရင် သိကြားမင်း ဆင်းအုပ်ချုပ်လည်း ကန်တော့ဆွမ်းပါ ပြောရမှာပဲ။
Filed under Experience, Politics
0 responses to “၀ါးတားတားများ”
If i want to vote, I need to go to D.C from San francsico.. hmm.. plane ticket is $300! .. 😀
so, NO VOTE!! 🙂
ကြားရတာ တကယ့်ကို ၀ိုးတိုးဝါးတားတွေပါပဲဗျာ။